के तपाई अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा आवेदन बुझाउन चाहानुहुन्छ?
अध्यागमन कानून » अत्यधिक कुशल आप्रवासी - अध्यागमन कानून
डच एलियनको नीति भित्र रहेको ज्ञान आप्रवासी योजनाले कम्पनीहरूले ज्ञान प्रवासीहरूलाई अपेक्षाकृत द्रुत र सजिलो बनाउन आकर्षित गर्दछ। यूरोपीय संघ बाहिरका देशहरूबाट उच्च योग्य कर्मचारीहरू नेदरल्याण्डमा उदाहरणका लागि वरिष्ठ व्यवस्थापन स्थिति वा योजनाको अनुकूल सर्तहरूमा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्न सक्दछन्।
ब्यानर एक अत्यधिक कुशल मिग्रान्टका लागि आवेदन दिनुहोस्?
अत्यधिक कुशल आप्रवासी - अध्यागमन कानून
डच एलियनको नीति भित्र रहेको ज्ञान आप्रवासी योजनाले कम्पनीहरूले ज्ञान प्रवासीहरूलाई अपेक्षाकृत द्रुत र सजिलो बनाउन आकर्षित गर्दछ। यूरोपीय संघ बाहिरका देशहरूबाट उच्च योग्य कर्मचारीहरू नेदरल्याण्डमा उदाहरणका लागि वरिष्ठ व्यवस्थापन स्थिति वा योजनाको अनुकूल सर्तहरूमा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्न सक्दछन्। जे होस्, दुबै ज्ञान आप्रवासी र रोजगारदाताले धेरै सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
> अत्यधिक कुशल आप्रवासी अवस्था
> ज्ञान आप्रवासी अनुरोध गर्नुहोस्
> यूरोपीयन ब्लू कार्ड
अत्यधिक कुशल आप्रवासी अवस्था
के तपाई ज्ञान प्रवासी हुनुहुन्छ र के तपाईं डच ज्ञान अर्थतन्त्रमा योगदान दिन चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई पहिले निवास अनुमति आवश्यक पर्नेछ। निवास अनुमति स्वीकृत गर्नु अघि, तपाईंसँग नेदरल्याण्ड्सको नियोक्ता वा अनुसन्धान संस्थानसँग रोजगार सम्झौता हुन अनिवार्य छ जुन आईएनडी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रायोजकको रूपमा नियुक्त गरिएको हो र मान्यता प्राप्त प्रायोजकहरूको सार्वजनिक रजिस्टरमा समावेश छ। तपाईंले पर्याप्त आय पनि कमाउनुपर्नेछ र तपाईंले आफ्नो रोजगारदातासँगको बजार अनुरूपको तलबमा सहमति जनाउनुपर्नेछ।
थप रूपमा, धेरै (अतिरिक्त) सर्तहरू तपाईंलाई एक अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा लागू गर्दछ। के परिस्थितिहरु तपाइँको व्यक्तिगत स्थिति मा ठीक निर्भर गर्दछ। मा Law & More, अध्यागमन वकिलहरूको छिटो र व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ। तपाइँको तपाइँको अनुप्रयोगको साथ मद्दत गर्न तिनीहरू खुशी हुनेछन्। अनुप्रयोगसँग अगाडि बढ्नु अघि, हाम्रा विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नेछन् ताकि तपाईं कुनै आश्चर्यको सामना गर्नुपर्नेछ।
न केवल तपाई, तर कम्पनीले तपाई काम गर्न लाग्नु भएको केही सर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। के तपाई त्यस्तो कम्पनी हुनुहुन्छ जुन अत्यधिक कुशल आप्रवासीलाई काममा लिन चाहन्छ? त्यो अवस्थामा, तपाईं सर्वप्रथम IND ले प्रायोजकको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ। तपाईंको कम्पनीको विश्वसनीयता र निरन्तरता महत्त्वपूर्ण छ। के तपाइँको कम्पनी प्रायोजकको रूपमा मान्यता छ? त्यो अवस्थामा, तपाईंको कम्पनीले निम्न दायित्वहरूको पालना गर्नुपर्दछ: प्रशासनको कर्तव्य, जानकारी प्रदान गर्ने कर्तव्य र हेरचाहको कर्तव्य। के तपाईंको कम्पनी त्यसो गर्न असफल हुन्छ? यदि त्यसो हो भने, यसले प्रायोजकको रूपमा मान्यता फिर्ता लिन सक्छ।
के तपाई नेदरल्याण्ड्स जान चाहानुहुन्छ? कानूनी सहायता मा कल गर्नुहोस्
ज्ञान आप्रवासी अनुरोध गर्नुहोस्
के तपाईंलाई निवास अनुमति दिइयो? यदि त्यस्तो हो भने, तपाईंको निवास अनुमतिको वैधताको अवधि तपाईंको रोजगार सम्झौताको अवधि अधिकतम years बर्षको बराबर हुनेछ। अनुमति अनिश्चित कालका लागि विस्तार गर्न सकिन्छ।
तपाईंको निवास अनुमतिको वैधताको अवधिमा, तपाईं रोजगारदातालाई एक अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को कम्पनीमा सामेल हुन सक्नुहुनेछ जुन IND द्वारा प्रायोजकको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। दुबै पुरानो र नयाँ रोजगारदाताले चार हप्ता भित्रमा तपाईंको काम परिवर्तन IND मा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
के तपाई अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा बेरोजगार हुनुहुन्छ? त्यो अवस्थामा, तपाइँ तपाइँको रोजगार समाप्त भए पछि दिन देखि तीन महिना को लागी खोजी अवधि को लागी हकदार हुनुहुन्छ। यदि तपाईं अर्को रोजगारदाता (प्रायोजक) मा सम्मिलित हुन असक्षम हुनुहुन्छ भने खोजी अवधि भित्र अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा, IND ले तपाईंको अनुमति रद्द गर्दछ।
यूरोपीयन ब्लू कार्ड
जुन २०११ सम्ममा, एक अत्यधिक कुशल आप्रवासीले ईयू ब्लू कार्ड (EU ब्लू कार्ड) को लागी आवश्यक निवास अनुमतिको अतिरिक्त आवेदन गर्न सक्नेछ। ईयु ब्लू कार्ड उच्च निवासमा युरोपियन युनियनका कुनै सदस्य राष्ट्रको नागरिकता नभएका उच्च दक्षता भएका आप्रवासीहरूका लागि निवास र वर्क परमिट हो।
यूरोपियन ब्लू कार्डले अत्यधिक कुशल आप्रवासीलाई धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। सबै भन्दा पहिले, अत्यधिक कुशल आप्रवासीको नियोक्तालाई IND ले प्रायोजकको रूपमा मान्यता दिनुपर्दैन। थप रूपमा, एक अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा, जसले युरोपियन ब्लू कार्ड पनि राख्छ, तपाईं नेदरल्याण्ड्समा १ months महिना काम गरिसके पछि अर्को सदस्य राज्यमा काम गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंले त्यस सदस्य राज्यमा सर्तहरू पूरा गर्नुभयो।
यूरोपीयन नीलो कार्डका लागि योग्य हुनको लागि, तपाईले कडा शर्तहरू पूरा गर्नै पर्दछ एक अत्यधिक कुशल आप्रवासीको रूपमा निवास अनुमति भन्दा। उदाहरण को लागी, तपाईसंग १२ महिना वा सो भन्दा बढी रोजगार रोजगार सम्झौता हुनै पर्छ, कम्तिमा year बर्षेत्तर स्नातकको उच्च शिक्षा (एचबीओ) मा पूरा गर्नु पर्छ र कम्तिमा ब्लु कार्डको तलब थ्रेशोल्ड प्राप्त गर्नुहोस्।
हाम्रो अध्यागमन कानूनका वकीलहरूको टोलीले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्दछ र IND मा तपाईंको लागि आवेदन पेश गर्दछ। के तपाइँ यो चाहानुहुन्छ वा तपाइँसँग अन्य प्रश्नहरू छन् र तपाइँ सल्लाह चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं।